अध्याय ८६ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मानिसहरूले म कृपालु परमेश्‍वर हुँ भनी भन्छन्; तिनीहरू भन्छन्, मैले सृष्टि गरेका सबैलाई म मुक्ति दिनेछु। यी सबै कुराहरू मानव धारणाहरूअनुसार भनिएका हुन्। म कृपालु परमेश्‍वर हुँ भनेर मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई भनिएको हो, र म सबैलाई मुक्ति दिनेछु भनेर मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरूलाई भनिएको हो। म बुद्धिमानी परमेश्‍वर भएको हुनाले, मेरो मनमा कुन-कुन मानिसहरूलाई म प्रेम गर्छु र कुन-कुन मानिसहरूलाई म घृणा गर्छु, म त्यस विषयमा स्पष्ट छु। मैले प्रेम गर्नेहरूका हकमा, म तिनीहरूलाई सधैँ अन्त्यसम्‍मै प्रेम गर्नेछु, र त्यो प्रेम कहिल्यै परिवर्तन हुनेछैन। मैले घृणा गर्नेहरूका हकमा भन्दा, तिनीहरूले जस्तो राम्रो व्यवहार गरे पनि म अलिकति पनि प्रभावित हुँदिन। किनभने तिनीहरू मबाट जन्मिएका थिएनन् र तिनीहरूसँग मेरा गुणहरू वा मेरो जीवन छैन। अर्को शब्‍दमा भन्दा, तिनीहरूलाई मैले पूर्वनियुक्ति गरेको र चुनेको थिइन—किनभने म गल्ती गर्दिन। अर्थात्, मेरा सबै कार्यहरूलाई पवित्र र आदरणीय भनेर भनिन्छ, र मसँग कहिल्यै कुनै पछुतोहरू छैन। मानिसहरूका नजरमा, म अत्यन्तै निर्दयी छु—तर म धर्मी र प्रतापी परमेश्‍वर स्‍वयम्‌ हुँ भन्‍ने कुरा तैँले पहिचान गर्दैनस्? मेरो हरेक कुरा ठीक हुन्छ; मैले घृणा गरेकाहरूले अवश्य नै मेरा श्रापहरू पाउनेछन्, र मैले प्रेम गरेकाहरूले अवश्य नै मेरा आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। यो मेरो पवित्र र तोड्न नसकिने स्वभाव हो, र यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्नेछैन। यो ठोस कुरा हो!
आज, साँचो रूपमा मेरा अभिप्रायहरू अनुरूप हुनेहरूलाई म अवश्य नै पूर्ण तुल्याउनेछु, किनभने मेरो काम स्पष्ट र पूर्ण दुवै छ, र म कुनै पनि कुरालाई स्पष्ट नपारी छोड्दिन। मैले श्राप दिएकाहरूलाई जलाइनेछ। त्यसोभए किन मैले श्राप दिइएका धेरैजसो मानिसहरूमा अझै पनि पवित्र आत्‍माले काम गरिरहनुभएको छ (म फोहोरी मन्दिरमा बस्दिन भन्‍ने विषयमा यसो भनिएको हो)? के तिमीहरूले सबै मामलाहरू र सबै कुराहरूले ख्रीष्‍टको लागि सेवा गर्छन् भन्‍ने भनाइको साँचो अर्थलाई बुझेका छौ? मैले तिनीहरूको सेवाको प्रयोग गर्दा पवित्र आत्‍माले तिनीहरूद्वारा काम गर्नुहुन्छ, तर सामान्यतया, जब तिनीहरू मेरो सेवामा हुँदैनन्, तिनीहरूले आधारभूत रूपमा आत्मिक हिसाबले अन्तर्दृष्टि पाएका हुँदैनन्। तिनीहरूले खोजी नै गरे पनि, तिनीहरूले जोशको आधारमा त्यसो गर्छन्, र यो शैतानको छल हो—किनभने साधारणतया तिनीहरूले मेरो काममा कुनै ध्यान नै दिँदैनन् र मेरा बोझहरूलाई कुनै ध्यान दिँदैनन्। अब मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू ठूला भइसकेका हुनाले, म तिनीहरूलाई लात हानेर निकाल्दैछु; यही कारणले गर्दा, मेरो आत्मा जहाँसुकैबाट निस्कनुभएको छ र मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई विशेष जोड दिइएको छ। के तिमीहरूले यो कुरा बुझ्यौ? सबै कुरा मेरा कार्यहरू, मेरो पूर्वनियतिमा निर्भर हुन्छन्, र सबै वचनहरू मेरो मुखबाट निस्कन्छन्। मेरा आशिषहरू प्राप्त गरेका सबै स्थानहरू अवश्य नै मैले काम गर्ने स्थानहरू हुन् र ती मेरो काम अघि बढाइने ठाउँहरू हुन्। चीन शैतानलाई सबैभन्दा बढी आराधना गरिने राष्ट्र हो, त्यसकारण मैले यसलाई श्राप दिएको छु। यसको साथै, यो मलाई सबैभन्दा बढी सताउने राष्ट्र बनेको छ। ठूलो रातो अजिङ्गरको प्रभावमा रहेका मानिसहरूमा म मेरो काम अवश्य नै गर्नेछैन। के तिमीहरूले मेरा वचनहरूको साँचो अर्थ बुझ्यौ? आखिर, मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरू थोरै छन्। पूर्ण रूपमा सबै कुरा मेरै हातमा छन्; मैले चुनेका र पूर्वनियुक्ति गरेका मानिसहरूमा ऊर्जा केन्द्रित गर्नुपर्छ र थप प्रयास लगाउनुपर्छ। अर्को शब्‍दमा भन्दा, मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूले हतार गरेर अभ्यास गर्नुपर्छ ताकि तिनीहरू चाँडोभन्दा चाँडो मेरा बोझहरूमा सहभागी हुन सकून्, र तिनीहरूका सारा प्रयास मेरो काममा समर्पित गर्न सकून्।
मेरो लागि सेवा गर्नेहरू, सुन! तिमीहरूले मेरो लागि सेवा गर्ने क्रममा मेरा केही अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छौ। अर्थात्, तँलाई मेरो पछिको काम र भविष्यमा हुने कुराहरूको बारेमा अस्थाई रूपमा थाहा हुनेछ—तर तैँले ती कुराको अवश्य नै आनन्द लिनेछैनस्। यो मेरो अनुग्रह हो। जब तेरो सेवा पूरा हुन्छ, तुरुन्तै गइहाल्, र ढिलो नगर्। तिमीहरूमध्ये जो मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू हौ तिमीहरू अहङ्कारी हुनु हुँदैन, तर तिमीहरूलाई गर्व गर्ने अनुमति छ, किनभने मैले तिमीहरूलाई असीमित आशिषहरू दिएको छु। तिमीहरूमध्ये जो विनाशको निसाना हौ, तिमीहरूले आफूमा समस्या ल्याउने वा आफ्‍नो गन्तव्यको बारेमा दुःखी महसुस गर्ने गर्नु पर्दैन। तँलाई कसले शैतानको सन्तान बनायो? तैँले मेरो निम्ति तेरो सेवा गरिसकेपछि, तँ अतल कुण्‍डमा फर्कन सक्छस्, किनभने उप्रान्त मेरो लागि तँ कुनै प्रयोगको योग्य हुनेछैनस्। त्यसपछि म तँलाई मेरो सजायद्वारा निराकरण गर्न थाल्‍नेछु। मैले काम गर्न सुरु गरेपछि, म यसलाई अन्त्यसम्‍मै जारी राख्‍नेछु; मेरा कार्यहरू पूरा हुनेछन्, र मेरा उपलब्धीहरू सदासर्वदा रहिरहनेछन्। यो सबै मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू, मेरा पुत्रहरू, र मेरा मानिसहरूमा लागू हुन्छ, र यो तँमा पनि लागू हुन्छ: तँलाई मैले दिने सजाय अनन्‍तसम्‍म रहिरहनेछन्। मलाई विरोध गर्ने दुष्टहरूलाई म अवश्य नै सजाय दिनेछु भनेर मैले यसभन्दा पहिले तिमीहरूलाई धेरै पटक बताएको छु। यदि तैँले मलाई विरोध गरिसकेपछि पवित्र आत्माले तँलाई हप्काउनुभयो भने, तँ पहिले नै श्रापित भइसकेको हुन्छस्, त्यसपछि तँलाई मेरो हातले प्रहार गर्नेछ। मेरो बारेमा खराब विचारहरू गर्दा यदि पवित्र आत्माले तँलाई अनुशासनमा राख्‍नुभयो भने, तैँले मेरा आशिषहरू प्राप्त गरेको छस्; तैपनि, तँ सधैँ सतर्क हुनुपर्छ, कहिल्यै पनि लापरवाही र असावधान हुनुहुँदैन।
अघिल्लो: अध्याय ८५
अर्को: अध्याय ८७